October 10, 2006, 4:11 am
ကျမ ခံစားနှစ်သက်တဲ့ ကျမ သိပ်လေးစားရသော မွေးစားဖေဖေ ရေးခဲ့သာ ဇတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါ.. တော်လှန်ရေးသမားတို့၏ တောတောင်ထဲက ပြည်သူတို့အတွက် ပေးဆပ်ထားသော ဘ၀တွေကို ပီပြင်စွာ ရေးသားခဲ့တာပါ… နိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတာ အမြဲတမ်းဒွန်တွဲနေပါတယ်…. တစ်ချို့သော သူများဆိုရင် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျမတစ်ချိန်က အွန်လိုင်းပေါ်က သိပ်ကိုချစ်လှပါတယ်ဆိုသော မောင်နှမတစ်ချို့ကတောင် နောက်ကျောဓါးနဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအရာမျိုးကမှ သိပ်မထူးဆန်းတော့ဘူး.. အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းဖော်ပြမယ်… မျက်စိ နားတွေမပွင့်သူကို ကြိုးစားပြောပြပေးမယ်.. မဟုတ်မခံ မတရားတာကို လက်ပိုက်မကြည့်နေနိုင်တော့ နိုင်တဲ့စာပေဘက်က ရေးပေးခဲ့တယ်.. တစ်ချို့ကတော့ ဒါကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကျယ်တယ်လို့ ပက်ပက်စက်စက်လာဆဲသူတွေလည်းရှိတယ်.. ပြဿနာမရှိပါဘူး.. အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် တစ်စုံတစ်ခုဆိုတာ လုပ်ဆောင်ပေးရမှာပဲ…. သူတို့ပြောပုံအရဆို လူမိုက်တိုင်ကို လက်သီးနဲ့ပြေးထိုးသလို နေပြည်တော်မှာ သွားအော်ပေးရမှာလား.. လွတ်လပ်ရေးတော့မရဘူး ထောင်နန်းစံပြီး ဦးနှောက်မရှိတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုတော့ ကျမ မလုပ်ဘူးလေ… ကိုယ်မှန်းတဲ့ ရည်မှန်းချက်သာလျင် အဓိကပါပဲ.. ထပ်ပြောမယ်.. ကျမက နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ဘူး… ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီး မတရားတာကို မတရားလိုပြောမယ်.. အချိန်ကျရင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကူညီရမယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်း အသင့်ပါပဲ…. ပါးစပ်တစ်ခု လက်၂ဖက်နဲ့တင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သဘောပေါက်ထား ကိုယ့်လူတို့… မီဒီယာဆိုတာ မရှိရင် နားတွေကန်းနေမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားပါလား.. နိုင်ငံရေးဆိုတာထက် လူယုတ်မာကို တော်လှန်တဲ့ တော်လှန်သူလို့ပြောရင် လက်ခံပါတယ်.. အခု ကျမလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ မွေးစားဖေဖေကိုဝေး ရေးထားသော စာထဲကနေ သွေးထဲကို ခံစားချက်တစ်ချို့ပျော်ဝင်နေမယ်လို့ ကျမယုံကြည်ပါတယ်… တိုင်းပြည်အတွက် မိမိရဲ့ပျိုမျစ်သော လူငယ်ဘ၀ ၊ စည်းစိမ်သုခ ၊ ချမ်းသာမှုအားလုံး အနာဂတ်အားလုံးကို စွန့်ပြီး တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေအားလုံးကို အများပြည်သူအပေါင်းက လေးစားချစ်ခင်လျက်ပါ ဖေဖေ…. မိမိတစ်ဘို့တည်းပဲကြည့်ပြီး သူတပါးလုပ်ရပ်ကို လိုက်ရှုံ့ချနေသော လူတွေအများကြီးကြားမှာ ဒီလို တော်လှန်သူတွေက ဆီနဲ့ရေလို သိပ်ကွာခြားလွန်းလှပါတယ်.. အမြဲလေးစားလျက်ပါပဲ…